I-oven yesitaladi yokushiswa komfucuza: izinhlobo zezakhiwo. Umgodi wokushisa udoti
Ezimweni zendawo yendawo yasemadolobheni, ukukhishwa kwezinto zokulahla udoti kuvame ukuvela. Ukukhipha imfucuza kuyabiza kakhulu, ngakho abanikazi abaningi bezo zakhiwo bangakhetha indlela yendabuko yokuqeda ukungcola okungenamsoco. Akuphephile ukutshala ama-bonfires ensimini evulekile, kuyoba ngempumelelo kakhulu ukushisa imfucumfucu emithini noma ezithombeni ezenziwe ngokwabo. Imiklamo enjalo, ungathenga esitolo, kodwa eshibhile, futhi ngezinye izikhathi mahhala, yenziwe ngokwayo.
Uma udinga ihhavini engadini yokutshisa udoti, ungasebenzisa umgqomo, ofakwe ezitini. Ukwenza lokhu, ukubhoboza noma ukugoba izimbobo phansi kwetangi. Izimbobo ezifanayo kumele zenziwe engxenyeni engezansi yomgqomo, kumele zifinyelele phakathi nendawo yokuphakama kwayo.
Okulandelayo, udinga ukulungisa isisekelo sezitini, phakathi kwabo kufanele ushiye izithuba zomoya. Umgqomo ufakwe kwi-pedestal, futhi emva kokuba ubeke udoti, ngaphakathi komlilo uvutha. Umshini wokushisa okwenziwe ngokwenza okunjalo ungahlala isikhathi eside uma uqinisa izindonga ngamashidi ensimbi noma ufake isitsha encane ngaphakathi. Ngemuva kokushisa lezi zincenye, zingashintshwa ngokusha.
Isixazululo esithile: isitofu esivela ku-heater
Uma une-ovini ye-sauna, osuvele ufuna ukuyithumela ensimbi, khona-ke ingaguqulwa ibe yindlela yokusebenzisa imfucuza. Ngisho noma isakhiwo singasebenzi, ngosizo lwamathuluzi afanelekayo kuyokwazi ukukhipha i-oven yangaphakathi izingxenye. Shiya kuphela i-grate ne-casing.
Ingxenye yangaphakathi iqiniswa yi-sheet yensimbi, okufanele ifakwe kwi-substrate. Ungakwazi ukulayisha lolu hlobo lwe-incinerator yangaphandle yemfucuza engenhla. Kodwa-ke, ngaphambi kokufaka izingxenye ezinkulu ngaphakathi, kubalulekile ukukhanyisa ilangabi ngamahlamvu noma iphepha elimile. Ngesikhathi sokushiswa kwemifucumfucu, isakhiwo kufanele sihlanganiswe ngeshidi lensimbi, sibeka itshe ukuze umusi ungaphunyuka.
Uma ufuna ukwenza umklamo ozohlala isikhathi eside, khona-ke isitini kufanele sisetshenziselwe ukwenza. Ukubonakala kwalesi sakhiwo ngeke kuphazamise ingaphandle yesayithi. Tshisa ihhavini elincane engadini lokushisa udoti, ungasebenzisa cishe izitini ezingu-115. Uma kunesidingo, imingcele yesakhiwo inganyuswa.
Okokuqala, kufanelekile ukulungisa isisekelo. Ukuze wenze lokhu, kuyadingeka ukusula indawo, ubukhulu bayo obuyi-70 x 100 cm. Ubuso buhlanganiswe nengqimba yeshlabathi ububanzi obuyi-5 cm. Umugqa wokuqala ubeke ngaphandle kwesixazululo. Phakathi kwezitini ezibekwe eceleni komklamo wokwakhiwa kwesikhathi esizayo, kufanele ushiye izikhala eziyi-15 mm. Zidinga ukulandelwa.
Emgqeni wokuqala kuzoba nezitini ezingu-8, eyodwa emigodini ngayinye, ezintathu phezulu nangaphezulu. Ngokwenza i-incinerator e-dacha, esiteshini esilandelayo ungaqala ukubeka i-grate noma izintambo ezinamandla, okugcina oku-odwe ngaphambilini noma oxhunyiwe ngcingo.
Ukuze kube nomklamo ozobe usayizi ohlongozwayo, izingxenye ezintathu ezihamba phambili nezingezansi ezingu-14 zanele. I-pan yomlotha ingakhiwa yitini, eyenziwe nge-sheet sheet noma ithululelwe ngesisombululo samamente nesihlabathi. Umugqa wesibili uzoba nezitini ezingu-8, noma kunjalo, izinto ezimbili kufanele zibekwe eceleni, zibheke ukugqoka. Uchungechunge olulandelayo luzoba nezikhala ezincane.
Umugqa wokugcina kufanele uqiniseke, ikhava yensimbi efakwe kusuka phezulu. Isithando somlilo singashintshwa isithando somlilo. Kubalulekile ngasikhathi sinye ukuhlinzeka ngezikhala zomoya zokuhamba. Inkosi izokwazi ukubeka imigoqo ye-grate, njengoba izokwenza umshini oqinile wensimbi noma ukufakwa kwensimbi.
Isitofu kusuka emgqonyeni wensimbi
Umkhiqizo omuhle wokwenza isithando esenziwe kabusha sizoba umgodi wensimbi ongadingekile. Njengoba wenze izenzo ezilula, ungenza le mishini ibe yi-incinerator. Imiklamo enjalo, ngenkathi ibhekwa njengephephile, kodwa lapho isetshenziswe, kufanele ulandele imithetho ethile.
Kuze kube manje, kunezinketho eziningi zokuthi uguqule kanjani umgqomo ube yi-incinerator yodaka. Omunye wabo ukukhipha phansi nge-chisel noma isiBulgaria. Engxenyeni engezansi, izimbobo eziningana ziboshwe, khona-ke umgodi ongajulile ugciniwe, ubude bawo bungu-1 m. Ububanzi bawo kufanele bube ngu-20 cm. Kumelwe kuqiniswe yi-bayonet eyodwa yefosholo.
Ngaphambi kokuba uphinde uvuselele emgodini, kubalulekile ukukhanyisa umlilo ovela emagatsheni noma emagatsheni owomile, umgqomo ubekwe phezulu, ukuze umoya ungene ngokukhululekile emapulazini aphansi. Ukunciphisa i-incinerator enjalo kufanele kukhishwe kancane kancane. Amagatsha amakhulu awona akudingekile, ngoba azophendukela ngomlotha ngenxa ye-traction enhle.
Ukuthuthukiswa kwesithando somlilo ngesimo somgqomo
Njengomkhuba wokubonisa, indlela engcono kakhulu yokwenza isitofu ukusebenzisa i-barrel engadingekile. Uma ingasakwazi ukugcina amanzi nokusebenza, akufanele iphonswe ngokushesha. Kulesi simo, ingxenye engenhla yomgqomo inqunywa yiBulgaria, kodwa hhayi ekugcineni. Kuleli qembu, weld the hinges bese ulungisa nabo.
I-chimney ifakwe emgodini, kanti izimbobo ezincane kuzodingeka ukufaka isitimela nokuphatha ukuze i-lid ingawa. Ngezansi, uthathe futhi ugobe indaba. Okulandelayo, udinga ukwenza i-latch kusuka kushidi lensimbi bese ulifaka ngamashidi avaliwe.
Umgqomo wokudaka udoti ulula kakhulu ezweni. Umlilo, ohlanjululwe ngaphakathi, uzophephile. Kuzobalulekile kuphela ukuqapha futhi ngezikhathi ezithile ukulayisha udoti. Ukucima amalangabi kungase kube masinyane, kuzolungela ukugcwalisa umgodla ngomhlaba kusuka ezinhlangothini ezimbili, bese ubeka ishidi lensimbi emgqonyeni ngokwawo.
Amafomu okwenziwe okwenziwe kusuka kubakhiqizi
Isithando somlilo sokushiswa kwemfucumfucu endlini yezwe ongayithenga kanye nesifomu esiphelile. Uma ungafuni ukuhlanganisela isayithi ngamabhawuni angaqondakali noma ukuthungatha, amadivaysi anjalo azoba yisisombululo sakho esingcono kakhulu. Zinekamelo lokushisa, ibhokisi lokuqoqa umlotha, kanye nesithando somlilo.
I-furna yokusebenzisa ingaba nemilo ehlukene:
Ngaphandle zifana neziqukathi ezindizayo. Umzimba uvame ukwenziwa ngensimbi enamandla, ehlanganiswe ne-koqweqwe lwawo olungaqinile emlilweni. I-incinerator yemfucumfucu evela kumkhiqizi ingase ibe neminye imisebenzi, isibonelo, kungenzeka ukushisa amanzi. Uma ukhetha idivayisi enjalo, kufanele uqaphele ivolumu ekamelweni lokushisa. Le parameter kufanele ihlotshaniswe nenani lemfucuza eqoqiwe. Okuphephile futhi okuphumelelayo kakhulu yizibonelo ezinomshini, ngoba ipayipi izokhipha umusi futhi ikhulise ukushisa.
Isigubhu sokushiswa kwemfucumfucu kumele sisetshenziswe ngokuhambisana nemithetho yokuphepha. Ukufakwa kwehhavini nokulahlwa kwemfucumfucumfucu kufanele kususwe ekutshalweni kwemifino nezindlu. Uhlobo aluvunyelwe ngesikhathi sokushisa okuphezulu noma umoya. Ungafaki kuhhavini otshani obomile, njengoba kungabamba umlilo bese usakaze umlilo kulo lonke indawo. Ukufinyelela ku-incinerator kufanele kulinganiselwe uma kunezilwane noma izingane ezincane ku-dacha. Ngesikhathi sokushisa, kunconywa ukuba uhlale eduze kwehhavini ngaphandle kokushiya kungalindelekile.
Faka umgqomo ovuzayo owenziwe ngama-debris ovuthayo onconywa ngezitini. Kule njongo, isayithi likhethiwe kulo okuyoba lula kakhulu ukuqoqa umlotha. Ngenxa yalokho, kuzokwenzeka ukuthola umlotha womgodi oyingqayizivele. Izimbobo ezenziwe phansi kwe-tank zizoba yi-grate. Ngenxa yalokho, uzothola umklamo olungiselelwe ongasetshenziselwa ukulahlwa kwemfucuza.
Igesi lokuvuza i-alamu: izinhlobo, izici
Iphrofayili yensimbi iyindlela ehlukile efanelekile yokwakhiwa kwezingodo
Isilinganiso se-electrograve: amamodeli athandwayo, ukubuyekezwa. I-electrogel ivaliwe noma ivuliwe - okungcono?
Trolleys Hydraulic ("isihlangu"). Amaloli esandla, ama-hydraulic, manual
Amafutha apholile. Ukubuyekezwa kwamafutha epholile
Indlela yokuhlazisa umuntu ngokuziphatha? Bulala iZwi
Tannins e itiye
Kungani amadada: puzzle phezu abatholako kanye neluhlelo lwelulwimi
12 izithombe eziyinqaba ku-Google Earth
Amazing Iran. Inhlokodolobha nezinye imizi yasehlanzeni
Kanjani ukuze uthumele isithombe nge e-mail, izinhlamvu amadokhumenti
I generator inverter: ukubuyekezwa. Kwafika ama-generator Petrol: Intengo
Iqhwa izandla siqu
Buyisela "windose 8" uhlelo ku-laptop, ne
Amashampu Professional "Schwarzkopf". Izinhlobo kanye nokubuyekeza amakhasimende